‘राधा २’ मा प्रियंकाको जोडी आयुष्मान ! - NayaMedia:: Naya Media । Leading Nepali News Portal
‘राधा २’ मा प्रियंकाको जोडी आयुष्मान !
मङ्लबार, अशोज १६, २०७५ (October 2, 2018, 11:10 am) मा प्रकाशित
पछिल्लो समय नायिका प्रियंका कार्की र उनका हुनेवाला श्रीमान अर्थात नायक आयुष्मान देशराज जोशी बेला बेलामा चर्चामा आउने गरेका छन् ।
उनीहरुको टिकोटालो भइसकेको छ । विवाह भने अर्को वर्ष अर्थात २०७६ मा हुने बताइएको छ । यी दुवैले अभिनय गरेको चलचित्र ‘कथा काठमाडौं’ यतिबेला प्रदर्शनमा छ । चलचित्रमा दुवैले अभिनय गरेको भए पनि उनीहरुको जोडी भने अर्कै छन् ।
यसैबीच प्रियंका र आयुष्मानको जोडीलाई चलचित्र ‘राधा २’ मा पनि देखिने पक्का भएको छ । अभिनेत्री प्रियंकाले चलचित्र ‘राधा २’ का निम्ति पहिले नै लिखित सम्झौता गरिसकेकी थिइन् । तर आयुष्मानलाई भने पछि अनुबन्धित गरिएको बुझिएको छ । उनीसँग पनि लिखित सम्झौता नै भइसकेको बताइएको छ ।
चलचित्र ‘राधा २’ को निर्देशन योगेश घिमिरेले गर्ने बुझिएको छ । ‘सुरुवातमा अन्य अभिनेताको खोजी नगरेको हैन तर यस रोल आयुष्मानलाई नै सुट गर्ने भएकाले उनीलाई नै लिइएको हो’, निर्देशक घिमिरेको भनेका छन् ।
म्युजिकल लभ स्टोरीको शैलीमा निर्माण हुन लागेको चलचित्र ‘राधा २’ राधाकै सिक्वेलका रुपमा बनाउन लागिएको हो । यसअघिको चलचित्र राधामा अभिनेता जीवन लुइटेल र संचित लुइटेलले रोमान्स गरेका थिए । चलचित्रको छायंकन कार्तिक ८ गतेबाट सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ ।